Vashandisi veIfree 13 vanotaura zvikanganiso pavanovhura neApple Watch | IPhone nhau
Ngirozi Gonzalez | 25/09/2021 18:00 | iPhone 13, Noticias
Kusvika kwe Covid-19 yakaunza pamwe neshanduko zhinji muhupenyu hwedu hwezuva nezuva. Imwe yadzo mask iyo yanga iinesu kubvira kutanga kwedenda. Nekudaro, chishongedzo ichi chinogumira zvimwe zviito zvataimboita mazuva ese, senge kuvhura yedu iPhone neFace ID. MunaEpril, Apple yakatanga chirongwa chekuvhura kuburikidza neApple Watch nekupfuura Face ID uchishandisa yechipiri ongororo system. Vashandisi veiyo nyowani iPhone 13 vari kutaura matambudziko kana vachishandisa basa iri uye Apple ingango fanirwa kuburitsa inogadziridza munguva pfupi kuti igadzirise.
Zvikanganiso zvekuvhura iPhone 13 neApple Watch
Vhura iyo iPhone neApple Watch paunenge wakapfeka ganda. Paunenge wakapfeka mask uye Apple Watch, unogona kusimudza uye wotarisa iyo iPhone kuti izarure iyo. Dzidza maitiro ekumisikidza uye kushandisa chinhu ichi.
Chinangwa cheizvi Kuzarura hurongwa zvaive pachena: dzivisa kushandisa Chiso ID kuvhura iyo terminal. Kune izvi, Apple yaifanirwa kuve nevekunze chengetedzo sisitimu yekusimbisa kuti tisu tiri kuenda kunovhura iyo iPhone. Uye apa ndipo pakapinda Apple Watch iyo inogamuchira chiziviso kana ichiedza kuvhura chishandiso. Mushure mekusimbisa, isu tinowana iyo yekutenderera tisina kubvisa mask.
Mumaawa ekupedzisira vashandisi veiyo nyowani iPhone 13 vari kunetseka kushandisa chimiro ichi. Kana ivo vachiedza kuvhura neApple Watch vanogamuchira mhosho meseji:
Kutadza kutaura neApple Watch. Ita shuwa kuti Apple Watch yakavhurwa uye paruoko rwako, uye iPhone yakavhurwa.
Maitiro ekuvhura yako iPhone ne mask uye Apple Watch
Kubudikidza Reddit vamwe vashandisi vakakwanisa kunzwisisa chikonzero chekukanganisa uku. Zvichida iyo iPhone 13 inogadzira kiyi yekuvhura kana danho ratanga uye rinotumirwa kuApple Watch kuvhura iyo terminal uchishandisa iyo kiyi. Zvisinei, kukanganisa uku kunokandwa nekuti iPhone 13 haigone kuburitsa yayo yekuvhura kiyi uye basa rakaremara uye kutaurirana pakati pemidziyo miviri hakuitwe.
Apple ingangoda kuburitsa yakagadziridzwa vhezheni yeIOS 15 kugadzirisa dambudziko iri. Zvichida kuti kana kubva kuApple ivo vachifunga kuti inofanirwa kugadziriswa nekukurumidza sezvazvinogona ivo vanozofunga kuvhura iOS 15.0.1. Zvikasadaro, ivo vaizomirira iyo iOS 15.1 vhezheni iyo yaizounza mamwe mabasa senge SharePlay ayo akabviswa muzvikamu zvekupedzisira zveyekuvandudza betas.
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » Noticias » Vashandisi veIfree 13 vanotaura zvikanganiso neApple Watch kuvhura
Darth koul akadaro
Ndine dambudziko rakafanana. Ini ndanga ndatomirira update.
Pindura Darth Koul
Zvinoitika kwandiri ine 13 pro max
Chokwadi, ini ndiri mumwe weavo vanobatwa nedambudziko iri. Ndinovimba vanoigadzirisa nekukurumidza, hazvigamuchirwe kuti mhando yekusagadzikana inoitika mune mudziyo wemutengo uyu.
Jesu R. akadaro
Vanotipengesa. Iko kuendesa kwese kwave kwakakwana, kunze kweMovistar eSIM iyo
Vanoramba vachikuita kuti upfuure mubhokisi, uye kuvhurwa nemask iyo inotipengesa.
Pindura kuna Jesús R.
Ndakaigadzirisa nekudzosa iyo iPhone uye mushure mekuidzoreredza se iPhone nyowani uye kurodha backup, zvese izvi zvakabatsirwa naApple uye zvinoshanda kazhinji kwandiri ndine iPhone 13pro
Izvo zvakare hazvindibvumidze kuti ndizvigadzirise kuti ivhure iyo Mac.Ini ndinowana kukanganisa kumwe chete.
Ini handina kundisiya neI IPhone 13 futi !!!! Ndakaedza zvese, kudzorera, kudzima, kumisikidza zvese zvishandiso uye hapana
IPhone 13 Pro bhatiri bvunzo inoratidza yakakura nguva yekumhanya